Mini crawler & wheel excavator
Noho ny tombony azo amin'ny habe kely sy ambany vidin'ny fampiasam-bola voalohany dia misy fampiharana isan-karazany amin'ny haingon-trano amin'ny fananganana tanàna, zaridaina fambolena ary lafiny hafa. Izy ireo no panax ho an'ny fiasan'ny injeniera kely.
1. Fanonganana trano fonenana: matetika ny trano fonenana legioma dia ambany, ary ny milina lehibe amin'ny fambolena dia tsy afaka manao hetsika ao aminy, noho izany ny fanodinana sy ny fantsakan-drano dia nosoloin'ny mpanao fikarohana bitika kely.
Fanamboarana tonelina 2: ambany ny haavon'ny fihadiana kely, azo sokafana amin'ny fanamboarana tionelina kely, ny mpamokatra sasany aza dia namorona «excavator» kely natosika herinaratra, sahaza kokoa ny tontolo iasan'ny tonelina.
3. Fanapahana ny fatana fandrendrehana vy: ny fanaovana vy dia mampiasa fitaovana mpanova na lafaoro mandeha amin'ny lafaoro mba hanaovana vy, ary maro ny silina vy no vokarina amin'ny fizotry ny fandrendrehana. Amin'ny dingan'ny fifampiraharahana amin'ny sombin-by, matetika ny mpitsongo dia manodina ny slag sy manala, ary ny tontolon'ny asa dia somary ratsy, izay fitsapana tsara ho an'ny mpamily sy ny mpitrandraka.
4. Haingo anatiny: ilaina ny mandrava ny rindrina ary mamaky ny lavaka mandritra ny haingon-trano anatiny. Ny mini-excavator dia mahomby kokoa noho ny sledgehammer artifisialy. Ny mpikaroka bitika dia kely kokoa ary azo idirana amin'ny alàlan'ny tohatra na koa ascenseur.
5. Eo amin'ny sehatry ny injeniera monisipaly: ny fitrandrahana ny lavaka ary ny famenoana ny fantsona ambanin'ny tany dia ilaina amin'ny fananganana kaomina. Ny micro-excavator dia nanjary safidy tsara indrindra amin'ny habeny sy ny fivezivezeny miovaova. Ankoatr'izay, ny sandry lehibe amin'ny excavator kely dia afaka mampihetsi-po 90 degre, izay tena azo ampiharina rehefa mandavaka tatatra amin'ny rindrina. mety, ary ny fampiasana kamio maivana na kamio mpitondra entana aza dia mety ho vita.
6. Fampandehanana zaridaina: kely dia kely ny tontolon'ny fambolena zaridaina, ary matetika ny hazo sy ny vokatra no voasakana. Amin'ny fananganana zaridaina fambolena, ny asa fitrandrahana sy ny fantsakana dia tsy mety ho milina lehibe azo ampiharina, ary mety ny mpitrandraka kely.
7. Fananganana ambanivohitra sy fanamboaran-dàlana: ny trano ambanivohitra tany am-boalohany dia mila fitrandrahana ny fototra sy ny lalan'ny fantsom-pifandraisana ambony sy ambany. Ankehitriny ireo asa ireo dia azo atolotra an'ireo mpitsongady kely hamahana, izay tsy mampihena ny herin'ny mpiasa ihany, fa manatsara be ny hafainganan'ny asa.
8. Asa mampidi-doza amin'ny haavo avo: Matetika isika mahita mpitsangatsangana kely miasa eo amin'ny hantsam-bato mandritra ny vaovao mandritra ny fanamboarana hantsana na ny asa fanarenana aorian'ny loza voajanahary. Ny chassis excavator kely dia azo ahodina ka ny ambaratonga ambony amin'ny cab dia mijanona ho ambany ihany, tady tariby mampiato ny fihadiana azy.
Forklift amin'ny solika & forklift elektrika
Forklift dia tsy ampiasaina amin'ny fitaterana an-dàlana, fitaterana an-dalamby, departemanta fitaterana amin'ny làlambe ihany koa, fa ampiasaina amin'ny fitehirizana ara-pitaovana sy fitaterana, paositra, miaramila ary departemanta hafa koa. Azo ampiasaina amin'ny fikirakirana entana betsaka, entana tsy misy entana, entana lehibe, sns, ary koa ny fikirakirana fikirakirana elanelam-potoana fohy, ampiasaina betsaka amin'ny toeram-pitrandrahana, trano fitehirizana, gara, seranana, seranam-piaramanidina, tokotanam-pitaterana, foibe fivezivezena ary foibe fizarana ary toerana hafa.
Ny fahatsinjovan'ny tsena forklift herinaratra dia azo lazaina fa malalaka be. Raha ny tena izy, ny herin'ny herinaratra dia ny motera elektrika, ary ny angovo dia bateria fitehirizana taty aoriana. Ny forklift eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao dia afaka mitondra ny gravité gravité amin'ny ankapobeny ao anatin'ny iray taonina hatramin'ny valo taonina. Amin'ny lafiny sakan'ny fandidiana dia eo anelanelan'ny 3,5 metatra sy 5.0 metatra izy io matetika. Ny antony ampiasana ny forklift herinaratra matetika kokoa dia mifandraika amin'ny fahombiazan'ny fiarovana ny tontolo iainana. kamiao forklift fandoroana anatiny, saingy somary lehibe ny vidin'ny enti-manana.
Raha ampitahanao ireo vokatra dia afaka mitondra tombony bebe kokoa ilay teo aloha. Ohatra, tsy hisy ny fandotoana ny tontolo iainana rehefa mampiasa ity karazana forklift ity, ary tsy hisy tabataba be rehefa mandeha ny vokatra. Noho io toetra mampiavaka ny forklift elektrika io, ny ankamaroan'ny orinasa mividy forklift izao dia ny mividy mivantana ity karazana forklift ity, indrindra rehefa miasa ao an-trano dia azo lazaina fa afaka mampihena be ny tabataba vokarin'ny trano anaty izany. Ho fanampin'izany, amin'ny orinasa sasany izay mitaky takiana avo lenta amin'ny tontolo iainana ivelany, hampiasa an'ity karazana forklift ity izy ireo.
Ny antony fampiasana forklift herinaratra amin'ny indostrian'ny fanafody dia satria tsy hiteraka fandotoana izany ary tsy hisy fiantraikany amin'ny famokarana fanafody. Faharoa, ny forklift koa dia ampiasaina amin'ny orinasa mpamokatra sakafo sy fanodinana sakafo. Betsaka ny mpividy no milaza koa fa mividy forklift Ny firoboroboan'ny tontolo iainana dia fironana amin'ny indostria. Ity karazana forklift ity dia hovidiana betsaka kokoa amin'ny ho avy. Ho fanampin'ny forklift elektrika, ny fividianana vokatra hafa dia tokony hitandrina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa.
Ampiasaina be amin'ny seranan-tsambo, atrikasa, toerana fanamboarana ary toerana hafa amin'ny fampiakarana sy fikirakirana ny milina, fitaovan'ny vano sy fananganana, famonjena vonjy taitra, fisandratana, milina, famonjena. Ny crane dia azo ampiasaina amin'ny atrikasa, wharf, subway, port, offshore field, metallurgy, hery niokleary ary ny toe-javatra miasa hafa. Miaraka amin'ny fanampian'ny crane, ny lanjan'ny tetik'asa, ny olana lehibe amin'ny fanondrotana entana dia mora voavaha .